Faran'ny tantaram-piainana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-03 > Faran'ny tantaram-piainana
Fotoana vitsivitsy lasa izay dia maty i Hery Hawking ilay fizika manaja sy be hajaina indrindra. Ny trano vaovaom-baovao dia manomana mialoha ny obituaries mialoha ary amin'ny fahafatesan'ny olo-malaza dia afaka mitatitra be momba ny fiainan'ny maty - anisan'izany i Stephen Hawking. Ny ankamaroan'ny gazety dia misy pejy roa ka hatramin'ny telo miaraka amin'ny sary tsara. Ny zava-misy betsaka momba ny nosoratany momba azy dia ny fankasitrahana ny olona iray izay ny fikarohana momba ny fomba fiasan'izao rehetra izao ary ny tolona nataony manokana amin'ny aretina mampihena no nampiaiky volana antsika rehetra.
Saingy ny fahafatesana no fiafaran'ny tantaran'ny olona iray? Misy bebe kokoa ve? Mazava ho azy fa fanontaniana iray taloha izao tsy misy valin'ny fikarohana siantifika. Tsy maintsy misy olona tafatsangana amin'ny maty ka milaza amintsika. Ny Baiboly dia mitantara fa nanao izany fotsiny i Jesosy - ary izany no fototry ny finoana kristiana .. Nitsangana tamin'ny maty Izy mba hilaza amintsika fa betsaka kokoa ny tantaram-piainanantsika raha oharina amin'ny eritreretintsika. Fijanonana no fijanonana fa tsy fijanonana. Misy fanantenana ankoatry ny fahafatesana.
Na inona na inona voasoratra ho an'ny fiainanao, misy fanampiny fanampiny. Avelao hanohy nosoratan'i Jesosy ny tantaranao.